Lazainay aminao ny fomba fiakanjinay rehefa mitsidika an'i Morocco | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | General, Maraoka
ny matetika ny fitsangatsanganana any Maroc dia misy fahatairana amin'ny kolontsainaNa dia misy tanàna mandray mpizahatany an-jatony isan-taona aza ankehitriny ary nifanaraka tsara tamin'ireo fitakiana ireo, toa an'i Marrakech na Casablanca. Na izany aza, raha handeha hitsangatsangana any amin'ny firenena izay ananantsika kolontsaina tsy mitovy amin'ny antsika isika, kolontsaina Silamo izay manana kaody fiakanjo, dia tsara kokoa ny maka hevitra momba izay ho hitantsika.
Ho hitantsika ny fomba fitafiana any Maroc ary inona ny akanjo mahazatra any. Fantatsika fa tsy voatery ny fitafiana amin'ny fomba iray, fa ny marina dia ny fanajana ny kolontsaina misy antsika dia mariky ny fanajana hatrany, noho izany dia hevitra lehibe ny handraisana izany.
1 Karazan'akanjo hitafy
2 Ahoana no fitafiantsika
3 Akanjo nentim-paharazana any Maroc
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika dia izany tsy misy lalàna milaza amintsika ny karazana akanjo tokony hotafintsika, izany hoe tsy voatery hanao karazana akanjo manokana fa tolo-kevitra. Karazan-akanjo matetika no atolotra noho ny antony maro, ny iray amin'izany dia tsara kokoa ny manaja ny fomba amam-panao any amin'ny firenena halehantsika, amin'ny fanajana tsotra. Tianay izy ireo hanaja ny fampiasantsika sy ny fomba amam-panaonay ka tokony hanao toy izany koa izahay. Ny antony iray hafa dia raha miakanjo am-pitandremana isika dia lasa tsy voamariky bebe kokoa ary tsy tokony hisarika ny sain'ny be loatra na koa jerena ratsy na lazaina amintsika zavatra. Aleo foana azo antoka amin'ny fisorohana ny fihetsika toy izany satria tsy mitovy amin'ny antsika ny kolontsain'izy ireo.
Ahoana no fitafiantsika
Fantatray fa miankina amin'ny toerana alehanao mivoaka mihoatra ny feony arakaraka ny akanjonao. Any amin'ny toerana toa an'i Marrakech dia be dia be ny fizahan-tany ka zatra amin'ny endrika ivelany rehetra, fa amin'ny tanàna kely kokoa dia toa manaitra ny manao akanjo fohy loatra na mampianatra zavatra be loatra ho azy ireo. Ny zavatra mahazatra dia ny manao zipo lava ary misy tampon izay tsy manana tenda ary manarona ny soroka. Na dia toa mavesatra loatra amintsika noho ny hafanana aza izany, ny marina dia miaro ny hoditra ihany koa isika ary miantoka ny tsy fahamaizana amin'ireo faritra toy ny soroka, ka dia tombony ihany izany. Tsy mila manao akanjo nentim-paharazana isika na dia afaka mankafy hatrany ilay zavatra niainana aza.
Raha ny amin'ny sarony sarondoha antsoina hoe hijab ny lohanao tsy ilaina izany. Betsaka ny vehivavy maraokana no manapa-kevitra amin'izao fotoana izao tsy hampiasa an'io scarf io ka tsy ilaina izany, na dia fahita matetika aza ny fahitana azy amin'ny vehivavy amin'ny toerana toy ny tanàna. Any amin'ny tanàn-dehibe dia tsy dia matetika loatra intsony izy io satria nitaona ny kolontsaina hafa izy ireo. Na izany aza, raha te hankafy izany traikefa izany isika dia afaka manao izany amin'ny fividianana landy tsara. Ary koa, io dia manampy amin'ny toerana toa ny efitra noho ny masoandro. Betsaka ny olona manapa-kevitra ny hitondra azy io amin'ny dia any an'efitra mba hahatsapa ho toy ny Berber ary koa hialana amin'ny olana amin'ny masoandro.
Olana iray hafa tsy misy ifandraisany amin'ny karazan'akanjo ity ny rehefa mafana any Maraoka manaova akanjo maivana nefa lava hiarovana ny hoditra amin'ny masoandro ary mba tsy ho maina ny hatsembohana ary hitazona ny hoditra ho lava kokoa. Izy io koa dia raharaha azo ampiharina ka torohevitra tsara ho an'ny lehilahy sy vehivavy ny mitafy akanjo nentim-paharazana. Ity karazan'akanjo ity dia afaka manampy antsika amin'ny fahavaratra marokana mba hijanonana ho tsara nefa hisorohana ny filentehan'ny masoandro.
Akanjo nentim-paharazana any Maroc
Any Maroc dia misy akanjo nentim-paharazana izay tsy mahaliana fotsiny ho fahatsiarovana rehefa mitondra zavatra mody, fa afaka manandrana mankafy ny kolontsain'izy ireo koa. Ny iray amin'izy ireo, izay ahazoana aina ihany koa, dia ny djellaba. Akanjo lava izay lava miaraka amin'ny pataloha amin'ny endriny iray ihany matetika. Ny akanjo lava dia misy amboradara mitovy amin'ny loko iray na hafa ary indraindray misy hood misy tendrony elongated izay tena mampiavaka azy. Akanjo hita any amin'ny toerana maro sy amin'ny loko isan-karazany izy io. Maizina sy mety amin'ny fahavaratra ny manarona antsika nefa tsy hodoran'ny masoandro.
El kaftan dia karazana akanjo lava ampiasain'ny vehivavy indrindra any Maraoka. Akanjo lava sy lava vita amin'ny akanjo lava ity ary hita amin'ny toerana hafa any Atsinanana ary toa avy any Persia no niaviany. Akanjo nentim-paharazana tena izy io izay azo ampiasaina amina endrika tsotra isan'andro sy amin'ny endrika amboarina kokoa ary amin'ny lamba lafo vidy amin'ny hetsika manokana toy ny fampakaram-bady. Ny Kaftans any Maroc dia natao ho an'ny vehivavy ihany ary ny sasany mety tena lafo amin'ny lamba manaja azy ireo, noho izany dia tsy takatry ny sainy foana ny mividy ho fahatsiarovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ahoana ny fomba fiakanjo any Maroc